राज्य संग्रहालय-रिजर्व Peterhof, सेन्ट पीटर्सबर्ग नजिकै, विश्व भर ज्ञात। यो साँचो कृति र रूसी वास्तुकला को एक महान उपलब्धि हो। विशाल क्षेत्र मा धेरै शानदार महलों, फोहराहरू र पानी Cascades, भूदृश्य पार्क छन्। Peterhof महल पार्क सबै दुनिया भर देखि पर्यटकहरु संग लोकप्रिय छ। अक्सर, अन्य देशका रूसी अतिथि बस मेरो आफ्नै आँखाले यो चमत्कार हेर्न।
वास्तु र पार्क जटिल को इतिहास
ऐतिहासिक स्रोतहरू मा Peterhof को पहिलो उल्लेख फिर्ता 1705 साल मिति। त्यतिबेला यो तपाईं द्वीप र कलिन प्राप्त गर्न सक्छन् जो देखि सिर्फ एक घाट थियो "यार्ड ट्रयाक।" 1712 मा म पत्रुसको आदेश मा grandiose गर्मी निवास को निर्माण, महान् महल 1714 मा निर्माण भएको थियो थाले। Peterhof एक अद्वितीय जटिल सिर्जना गर्न साइट रूपमा छान्नुभएको थियो आकस्मिक छैन। पत्रुस निवास, भर्साइल्लेज भन्दा बढी सुन्दर छ चाहन्थे। यो क्षेत्र मा परिदृश्य घडी वरिपरि सिजन कि सञ्चालन पानी Cascades र फोहराहरू को एक प्रणाली निर्माण गर्न अनुमति दिनुभयो। Peterhof महल पार्क निर्माण भएको थियो र शताब्दीमा XX गर्न XVIII देखि पुनर्निर्माण, र प्रत्येक पछि सम्राट आफ्नै को कुरा थपियो। 1917 को घटना पछि, पार्क, उद्यान र दरबार को जटिल एक संग्रहालय रूपमा मानिसहरूलाई खोलिएको थियो। धेरै हदसम्म रिजर्व द्वितीय विश्व युद्ध को समयमा भोगे, तर पछि यो ध्यानपूर्वक पुनःस्थापित र फेरि पर्यटकहरूलाई यसको ढोका खोल्न गरिएको छ।
Peterhof को महलों
अनुभवी यात्री पनि एक पुरा दिन को लागि, यो सम्पूर्ण क्षेत्र र दरबार र पार्क टुकडी को जोखिम हेर्न असम्भव छ भनेर भन्न। को आरक्षित को केन्द्रीय र सबै भन्दा रोचक वस्तु महान् महल मानिन्छ। शाही परिवारका सदस्य बस्थे र शताब्दीयौंदेखि स्मार्ट प्रविधी मंचन जहाँ यो छ। धेरै पटक ग्रान्ड महल आंशिक यसको उपस्थिति परिवर्तन र आज यसको सजावट इतिहास विभिन्न अवधि लगाया जान सक्छ। पार्क Peterhof ज्ञात छ, पत्रुस महान् द्वारा स्थापित भएको थियो। Montplaisir - म वर्तमान दिन र ठूलो सार्वभौम को मनपर्ने दरबारमा त्यहाँ रहेका (फ्रान्सेली देखि एक शाब्दिक अनुवाद - "मेरो खुशी")। अक्सर यो सम्राट (आधुनिक प्रदर्शनी पत्रुस महान् व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि धेरै देख्न सक्छन्) यहाँ बसे छ। Peterhof मार्फत एक पैदल समयमा, पर्यटक पनि विशिष्ट अतिथि पाहुना मा निर्मित एलिजाबेथ र Marly महल को शासन, समयमा receptions र बल लागि निर्मित क्याथरीन शरीर, भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
कम पार्क र माथिल्लो गार्डन
यो दुनिया-प्रसिद्ध Peterhof रिजर्व यसको कम पार्क धन्यवाद हासिल गरेको छ कि विश्वास छ। यसलाई मूल सुशील फ्रान्सेली शैली (नियमित) मा डिजाइन गरिएको थियो। पनि पत्रुसको समयमा महान् सीधा ज्यामितीय बाटाहरू, सुन्दर pavilions, यहाँ आए समान रूप रूखहरू र ब्रश छोट्याउन। पार्क मा हामी मूर्तिहरु र फोहराहरू धेरै फेला परेन। खाडी गर्न ग्रैंड महल देखि सीधा लाइन दुई बराबर भागमा हरियो क्षेत्र अलग समुद्र च्यानल फैलिएको। Peterhof को कम पार्क किनभने यसको फोहराहरू को प्रसिद्ध छ। यो क्यासकेड "चेकरबोर्ड", "रवि", "ग्रीनहाउस फोहरा" क्यासकेड "सुन पहाड" र केही अरूलाई। माथिल्लो बगैचा अठारौँ शताब्दीको दोस्रो आधा सम्म व्यावसायिक उद्देश्यका लागि प्रयोग भएको थियो। यसलाई पछि समयमा त्यहाँ मूर्तिहरु र फोहराहरू थिए मात्र थियो।
Cascades र फोहराहरू माथिल्लो बगैचा
माथिल्लो बगैचा मा पहिलो फोहरा 1734 मा देखियो। सुरुमा, केन्द्र एक विशाल ओक, नेतृत्व बनेको थियो। यसैले नाम - "ओक"। Cupid एक बहने मूर्तिकला संग सजाया आज राउन्ड पूल, आफ्नो मास्क बन्द लाग्छ। 1736 मा खुलेको एक फोहरा, - यो अविश्वसनीय प्रभावशाली "नेप्च्युन" देखिन्छ। सुरुमा उहाँले मूर्तिकला "द गाडी Neptunian" सजिएको थियो, तर 18 औं शताब्दीको अन्त्यमा यो यस्तै संरचना बदलिएको थियो। तपाईं पनि माथिल्लो बगैचा र "Mezheumny" को फोहरा-वर्ग ponds देख्न सक्छौं।
Peterhof (पार्क): टिकट मूल्य र पर्यटकहरुका लागि जानकारी
संग्रहालय-रिजर्व यस अद्वितीय भ्रमण कति छ? को पर्यटकहरु को सुविधा लागि माथिल्लो उद्यान / ग्रैंड महल र तल्लो पार्क अन्वेषण लागि छुट्टाछुट्टै टिकट किन्न आमन्त्रित गरिन्छ। पहिलो भ्रमण रूसी नागरिक लागि 400 rubles र अन्य देशका आगंतुकों लागि 550 rubles खर्च हुनेछ। तल्लो Peterhof (पार्क) मा प्रवेश कति छ? रूसी नागरिक लागि 500 rubles - - हप्तादिन मा 300 rubles र 400 rubles - सप्ताह अन्त मा विदेशी पर्यटकहरूले भ्रमण को लागत।
बच्चाहरु को लागि छूट, विद्यार्थी, पेंशनरहरुलाई र लाभ उठाउनेहरू अन्य विभाग छन्। छुट गर्ने अधिकार पुष्टि कागजातहरू प्रस्तुत गर्नु पर्छ एक कम मूल्य मा एक प्रवेश टिकट खरिद गर्न।
चेतावनी: फोहराहरू मई9देखि सेप्टेम्बर को अन्त गर्न सञ्चालन, आफ्नो उद्घाटन र समापन एक उत्सव वातावरणमा मनाइन्छ। Peterhof पार्क 19:00 सम्म दैनिक खुला छ। मा काम गर्ने दिनहरु फोहराहरू 17:00 मा बन्द र सप्ताहन्तमा मा - आगंतुकों लागि इलाका को समापन मा।
Katkov स्लट - एक आराम छुट्टी लागि छुट्टी गाउँमा
मेट्रो स्टेशन "किन्नुहोस"। महानगर क्षेत्र Novokosino
अक्टोबर मा Kemer मा यात्रा: मौसम, मूल्यहरू आकर्षण
दिल्ली - उमेर र राष्ट्रका शेष को स्थान
औषधि "Mamoklam": प्रयोग र analogues लागि समीक्षा mamologist, निर्देशन
Hepatitis सी प्रसारण बाटो रूपमा hepatitis सी संक्रमित हुन्छन्
आफ्नो हातले बाँदर। क्षेत्रीय ढाँचाहरू। क्रिसमस खेलौना
हात grenades। हात खण्डीकरणको क्रमलाई grenades। हात ग्रेनेड RGD सम्म 5। हात ग्रेनेड फा-1